> Resource > DVD > Alternative ImgBurn for Windows talinayo
ImgBurn waa software gubashadii si fiican u yaqaan DVD oo lacag la'aan ah ay isticmaalaan dadka isticmaala aad u badan. Laakiin waxa ay leedahay khasaaraha ay u gaar ah. Ma waxaad baadi agagaarka for kale ka fiican yahay ImgBurn sida dadka kale? Hadda waxa la joogaa wakhtigii si aad u ogaato DVD gaare wanaagsan your computer.
My jeedin waa Wondershare Video Converter Ultimate , taas oo ah video iyo DVD aalad awood u diinta video iyo DVD abuurka. Waa xalka madadaalada dhan-in-mid video aad Windows iyo Mac. Sida kale haboon ImgBurn, waxay dhammayn karo hawlaha Imgburn kuwan:
1. Guba videos in DVDs ciyaarta ku DVD guriga ciyaaryahanka.
2. filimada qaab ISO image Guba si DVD disc.
3. Qor Folder DVD in DVD disc ah daawashada TV-ga.
4. U beddelaan DVD in video, DVD folder iyo ISO (auto ilaalinta saarista).
5. Samee image ISO ka folder DVD ama video files.
Waxaa sidoo kale jira qaababka kale ee Video Converter Ultimate in ImgBurn ma taageeri ma, sida qoraalka DVD menu, degsado online video, qoraalana screen video, video tafatirka, diinta audio, iwm
Isticmaal ImgBurn Alternative si Guba DVD ee Windows
Tallaabada 1. Ku dar files warbaahinta in ImgBurn Alternative
Ka dib markii ay ku rakiban barnaamijkan kale oo ay ImgBurn, files dejinta ku xiran tahay hawlaha kala duwan. Dhammaan alaabta laga keeno muuqan doonaa sida thumbnail ee guddiga tagay iyo sida icon ah oo ku saabsan DVD ah menu suurto gal ah. Maskaxda ku hay in DVD5 ku jiri kara oo ku saabsan 4.7 GB of videos halka DVD-9 oo ku saabsan 8.5GB. Haddii loo baahdo, u habayn iyo items by jiiday iyo tagtey.
Si aad ku shuban DVD ama DVD Folder, image ISO, riix "DVD Load" button.
Si aad ku dari video files si ay u gubaan DVD ama abuuro ISO image ama DVD gal, riix "Add Files" button.
Ogow in haddii ujeedadaadu tahay in ay gubaan DVD, waxaad u leedahay in dajiyaan files ee "Guba" interface.
Si aad xaalkaa video ah, si loo waafajiyo baahidaada, kaliya aad u muujiyo shay daray oo xaq u riix, markaas dooranayaan Edit u qalab video tafatir sida beerista, falinjeeerka, qoqobada, watermark, saamaynta, iwm
Dhamaan qaababka wax soo saarka caanka ah waxaa taageera, oo ay ku jiraan wax kasta oo qaab joogto ah video (MP4, MOV, AVI, iwm), DVD disc, DVD folder, image ISO iyo .dvdmedia (Mac kaliya). Si loogu badalo in ay video kale ama qaab maqal ah, waxaad dooran kartaa qaab outut ku garaacida icon qaab of interface ah "Beddelaan" ah.
Haddii aad u baahan tahay si ay u gubaan DVD, ee "Guba" interface, ku dhacay "Change Template" badhanka qorayaasha aad DVD menu. Haddii aadan rabin in menu ah, oo kaliya dooran "Menu No".
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha iyo bilowdo diinta
Hubi in wax walba waa kaamil by previewing aad video furmo Xiisaha Leh. Marka aad diyaar tahay, riix "Beddelaan" ama "Guba" badhanka si barnaamijka si toos ah ayaa dhameystiri doona hawlaha.
Qabtay. Waxa kaliya in si fudud loo isticmaali kale ImgBurn this. Waxaa Download in ay tijaabo ah oo lacag la'aan ah muddo 30 maalmood ah. Watermark lagu dari doonaa video saarka la version maxkamadda ka. Amarka si meesha looga saaro watermark oo uu nool yahay hagaajinta lacag la'aan ah iyo taageero farsamo oo ka mid ahaa!
Top 10 Disney DVDs Habboon ee loogu talagalay Kids